ANDEHANANA AMIN'NY FAHAMARINANA NY FINOANA | FJKM Amboniloha
ANDEHANANA AMIN’NY FAHAMARINANA NY FINOANA
Anisan’ny zavatra iray mampatahotra ny olona amin’izao fiainana izao ny fijoroana amin’ny fahamarinana. Eny fa na dia ny Kristiana aza dia tratra izany fakam-panahy izany matetika. Raha marina loatra ianao dia iomehezan’ny olona: “Miseho ho masina…tsy ampahafiriny…olombelona ihany anie ny tena e…mba mandainga koa indraindray hahatafita amin’ny fiainana e! Ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra ka aleo manao ny fanaon’ny olona!
Miantso anao izay efa nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjy, Jesoa Ilay Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana dia Andriamanitry ny fahamarinana. Manao fahamarinana Izy ary mitaona anao Zanany tsy hikambana amin’ny ratsy fa hanao ny marina tahaka Azy. “Aoka ho masina hianareo satria masina Aho Jehovah Andriamanitrareo” (Lev.19, 3). Hoy I Paoly: “Aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin’ny fahalotoana rehetra, na amin’ny Nofo na amin’ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin’ny fatahorana an’Andriamanitra” (2Kor.7, 2). Mba handehananao mpino amin’ny fahamarinana dia manoro anao izay tokony hataonao ny Tompo amin’ny alalan’ny teniny izay fanilon’ny tongotrao sy fanazavana ny lalanao:
Tandremo sy ankatoavy ny Tenin’Andriamanitra (Jak.1, 22). Torio madio, ampianaro amin’ny fahamarinana ny Tenin’Andriamanitra izay mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra (2Kor.7, 14; 2Tim.3, 16). I Jaona mpanao batisa, ohatra, dia sahy nananatra an’i Heroda mpanjaka ka nilaza fa tsy mety ny nakany ny vadin’ny rahalahiny ka tokony hiala amin’izany ratsy izany izy (Mar.6, 20). Fianarana ho antsika kristiana izany, tsy miray tsikombakomba na mijery maso fotsiny ny tsy mety ataon’ny hafa, fa sahy mijoro manambara ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra ho fanitsiana izay diso.
Ny torolalana omen’Andriamanitra ao amin’ny Lev.19, 35-37; Lio.3, 12-14 manambara izay tokony hataonao olony eo amin’ny asanao andavan’andro mba handehananao amin’ny fahamarinana. Raha mpitsara ianao dia aoka hanao ny marina amin’ny fitsaràna; Raha mpivarotra ianao dia aoka hanao ny marina amin’ny fandrefesana, amin’ny fandanjàna na famarana. Raha mpamory hetra hianao na mpiadidy dia aoka tsy hampandoa mihoatra noho izay notendrena halaina. Raha manam-pahefana na miaramila hianao dia aoka tsy hiampanga lainga ary aoka hianina amin’ny karamanao. Halaviro izany ny kolikoly sy ny tia tia kely e! Aoka tsy ho ny vola aman-karena (mamôna) no tompoina sy omem-boninahitra fa Andriamanitra izay fahamarinana (3Jao.1, 4-8; Lio.16, 13).
Aoka hiaro tena tsy ho azon’ny fahotàna na dia mivelatra manoloanao aza ny fakampanahy. I Davida dia tsy mba naninji-tanana tamin’i Saoly voahosotr’i Jehovah na dia nikasa hanisy ratsy an’i Davida aza izy ka nanenjika azy. (1Sam.24, 11-18). I Josefa tsy mba nanaraotra ny fahatokian’i Potifara tandapan’i Farao azy fa tena natahotra an’Andriamanitra ka tsy nanaiky fa nandà hatramin’ny farany ny fakan’ny vadin’i Potifara fanahy hijangajanga aminy (Gen.39, 9.10). Ry Kristiana malalan’i Jesoa Kristy ô, na dia mety ho fanaon’ny olona manodidina anao eto amin’ izao tontolo izao aza ny mamaly ratsy ny ratsy, ny mijangajanga hatrany an-toeram-piasàna sns dia aoka tsy ho tafaroboka amin’izany ianao fa tsy ankasitrahan’Andriamanitra izany, fahavetavetana eo imason’i Jehovah. Mibebaha raha sendra efa tafalatsaka tao anatin’izany fakam-panahy izany ianao. “ Mangataka aminao aho ry rahalahy,noho ny famindrampon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra,dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.” (Rom.12, 1.2). Tsarony fa efa nantsoin’Andriamanitra ho fahazavana eto amin’izao tontolo izao ianao fa tsy hikambana amin’ny ratsy izay mbola miaina ao anaty aizina.
Aoka haharitra hijoro amin’ny fahamarinana hatrany ianao ka hiambina amin’izany mandra-pihavin’ny Tompo (Mat.24, 32-44; 1Kor.1, 7-9). Taomy koa ny hafa hijoro hanaraka hatrany ny tenin’Andriamanitra izay fahamarinana ka hiaro tena tsy ho azon’ny fahotana. Mahereza fa tsy ho very maina akory ny fanaovanao sy fandalànao ny fahamarinana (Sal.18, 20-27). Ny Tompo mitsinjo sady mamaly soa anao na dia mety tsy ho takatry ny saina aza. Ny marina tsy mba maty fa velona hatrany ao amin’i Jesoa Kristy. “Izay mamerina ny maro ho amin’ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria” (Dan.12, 3b). Hamirapiratra aminao hatrany anie ny Voninahitr’Andriamanitra!
Catégories :	Editorial	/ par AnjGab 2 novembre 2015